Radio Don Bosco - Vohitra Akamasoa...
Niainga tamin'ny foto-drafitr'asa farany izay tsotra ny tao Andralanitra 30 taona lasa mahery. Ankehitriny, tanàna itoeran'ny fandrosoana amin'ny lafiny samihafa no tazanao ao amin'ny ankapobeiny. Ny finoana tokoa mahafindra tendrombohitra, ka nody ventiny ny rano natsakaina. An'hetsiny ireo olona nandalo tao amin'ny toby Akamasoa nila vonjy ka nampian'ny Fikambanana. Nahatsangana trano 3.000 mahery ny Akamasoa, efitrano sekoly 300 mahery amin'ireo, sekoly 30 vaovao nahorina. Miisa 30.000 ny olona mipetrakaao amin'izany vohitra izany tamin'ny faha-30 taonany, izay ireo nampian'i Mompera Pedro, izay avy aminà fianankaviana sahirana an'arivony maro. Manodidina ny 14.000 ny ankizy mandia an-tsekoly. Izany no porofo hoy Mompera Pedro fa tsy lahatra akory ny fahantrana.